Ukunakekelwa kancanyana kwesikhumba somntwana
Ukuze izikhumba zesikhumba zidinga ukunakekelwa okukhethekile. Yiyiphi? Buza isazi!
Ngemuva kokuthi umntwana azalwe, kufanele ajwayele izimo ezintsha ngokuphelele. Isikhumba somntwana siphinde sishintshe. Amafutha okuqala ayanyamalala, futhi isikhumba siqala ukucima. Kubonakala izimbungulu ezincane ezibomvu, okukhumbuza izintuthwane ezincane. Isikhathi esingaphezu kwenyanga kamuva, isikhumba semvuthuluka sizoba bushelelezi. Ukunakekelwa kancani kwengane yakho kuzokusiza ukuba ungacabangi ngezinkinga ezifana nezifo zesikhumba. Ama-Fractures
Angabonakala uma ungayinakekeli kahle ingane noma ngenxa yokushisa imvuthuluka. Uchoko luyisilonda esinyene esibumba emaphethweni esikhumba noma phakathi kweminwe. Ukomisa okhethekile amafutha noma ama-powders, kanye namafutha okugcoba nama-creams aqukethe i-zinc, anikeze umphumela omuhle kakhulu.
Ukubonakala kwe-diaper ukuqhuma kungavinjelwa. Sula ingane ngokuphelele emva kokugeza, yoma yonke imibimbi. Emva kokugeza, shayela isikhumba somntwana ngekhilimu ekhethekile ethengwe ekhemisi. Ukunakekelwa kancani kwengane kudinga ukunakekelwa njalo nokunakekelwa komama.
Qaphela imithetho elula yokusebenzisa i-diaper elahlayo: thola amathayiphi alahlekile wezinga elifanele lomntwana. Hlukanisa ama-band elastic and fix the fasteners. Ngokuhamba kwesikhathi, shintsha i-diaper. Hlela amabhati okugeza emoyeni ngesikhathi ugqoka, ushiya imvuthu uhamba ze imizuzu engu-10-15.
Amanzi okugeza angasiza nje ekulwa nezifo zesikhumba, kodwa futhi lukhuni ingane. Uma ungeke ukwazi ukuphulukisa ukukhwabanisa kwe-diaper, qiniseka ukuthi ubonisa ingane kudokotela wezingane.
Isikhumba somntwana sidinga ukuvikelwa emgwaqeni. Ngenkathi ebandayo, sebenzisa ukhilimu ovikelayo. Sebenzisa ukhilimu ezindaweni eziveziwe zesikhumba (ebusweni nasezandleni). Lokhu kuzovimbela ukuqhuma nokuqhwaza. Ngokuvamile ukhilimu "ovela esimweni esibi sezulu" unesenzo sokulwa nokuvuvukala nokuphulukisa.
Sebenzisa ukhilimu ovikelayo, udinga okungenani imizuzu engu-15 ngaphambi kokuhamba. Ngosuku oluhle lwehlobo ehlobo, sebenzisa ukhilimu we-suntan cream. Ihluke kumuntu omdala nge-factor high protection.
Ukugeza kwansuku zonke komntwana kuyinkambiso ebalulekile futhi emnandi, kanye nesibambiso sokunakekelwa kancanyana kwengane. Khetha isikhathi sokubhukuda "- ezinye izingane zithanda ukugebha ngaphambi kokulala, kanti abanye bakhetha ukugebheka phakathi nosuku.Izimo ezifanayo nokushisa kwamanzi.Kufanelekile ngamanzi afudumele, amanye afana namanzi ashisayo, kanti abanye bayakujabulela ukugeza okupholile.Umntwana kufanele" uzokutshela "mayelana nezintandokazi zakho nokukhala okuqukethwe noma ukukhala okucasuliwe. Eminyakeni embalwa eyedlule, ukuncoma odokotela ukugeza izinsana esisombululo se-potassium permanganate kwakuthandwa kakhulu. Uma unquma ukulandela lesi seluleko, khumbula ukuthi amakristali we-potassium permanganate kufanele aqale ahlakazwe ngamanzi amancane (isibonelo, ekomelweni). Kuphela emva kwalokho, uthele ikhambi ekugezeni.
Lapho ugeza, ungasebenzisa amakhambi. Brew them kusengaphambili bese bahlanza ebhodini. I-Chamomile futhi i-turn will approach for the purification of the skin, i-lavender - njengokunakekelwa nokunakekelwa kwengane yesikhumba. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzise izimonyo ezikhethekile zokugeza (ubhubhe bokugeza, i-gel yokugeza yezingane), unquma. Abakhiqizi bavame ukukhiqiza imikhiqizo ehlanganisiwe - kufanelekile kokubili umzimba kanye nezinwele. Kodwa ungathenga i-shampoo kanye ne-agent egeza. I-shampoos yezingane ayibangeli ukucasuka uma ingena emehlweni, yengeza amaflegi "athakazelisayo" athile.
Ezinganeni ezinezinwele ezinde nezinwele, zikhiqiza ama-shampoos akhethekile okusiza ukulwa. Akubona bonke abantwana abathanda ukugeza izinwele zabo. Omunye akathandi ukuwamanzisa, abanye besaba ukuthi insipho izowela emehlweni akho. I-cap ekhethekile yokuzivikela isiza ukuvimbela ama-sud ukungena emehlweni.
Ngokuvamile abazali bakhathazeke ngokubonakala kwamagundane esikhwameni (seborrheic dermatitis). Ungasebenzisa indlela yendabuko yokusebenzelana nayo. Uzodinga amafutha kanye ne-scallop njalo. Lubricate ama-crusts ngamafutha ngaphambi kokugeza, futhi emva kwesikhashana ubahlanganise ngekhefu. Inqubo yesikhathi eside, akuwona wonke amafidget azohlala lokhu kuhlolwa. Kukhona ama-shampoos asiza ukulwa nama-crusts ekhanda ngaphandle kokudambisa. Ngezinye izikhathi izinqubo zokuhlanzeka azikho emphumela. Khona-ke kufanelekile ukubonisana nodokotela. Kunoma yikuphi, kufanele balahlwe.
Mhlawumbe imbangela yezifo zesikhumba kufihlwe ekudleni, futhi kufanele ubuyekeze ukudla. Ungenzi izinqumo zakho ngokwakho, uthintane nodokotela wezingane.
Ingane ikhula futhi iba ngokwengeziwe. Manje usephunga isepha ezandleni zakho, ezama ukugeza izandla zakhe ngokwakhe. Vumela imvuthu ibe nensipho ngendlela yesilwane esincane esilula, ithawula elikhanyayo nesitebhisi-sinyathelo, esimi lapho efika khona kugobolondo. Ungavimbeli ingane ekukhuleni! Ukuthenga i-dowry yengane, ungakhohlwa ukuthenga nokuthi yini okuqinisekile ukuthi ingeneka ngokunakekela ukunakekelwa kwengane yakho. I-ointment equkethe i-zinc izosiza ekulwa nokukhwabanisa kwe-diaper. I-Zelenka noma i-iodine inomthelela we-disinfectant. Vumela emkhakheni wekharenda wakho wezokwelapha kuyohlale ikhona ukotini woboya, ukubopha kanye ne-plaster. Ngeseluleko sesidokotela sesazi, thola imishanguzo yokulwa ne-antiallergic ezosiza ekubhekaneni nezimpande zesikhumba. Isixazululo esiwusizo nesokwenyama.
Ukunakekelwa ukuhlanzeka kwemvuthu, ungakhohlwa ukunakekelwa kwezindlebe, ikhala lomntwana. Ukuhlanza izindlebe nekhala, sebenzisa uboya bekotini, hhayi izicathulo. Izinduku zingalimala izindlebe zengane.
Bheka izipikili zezinhlanzi. Izikrini ezinezimiso ezinzima ziphephile. Ezandleni zakho, usike izipikili zakho ku-semicircle, emilenzeni yakho - ngokuqondile.
Omama abaningi basebenzisa i-lotion enomsoco noma amafutha omntwana esikhumba somntwana. Kungcono, uma kungenayo iphunga elimnandi nama-dyes. Ukunakekelwa kancani kwengane kuyisibambiso nempilo yakho, futhi.
Ungathengi izimonyo ezintsha zezingane zamabhodlela amakhulu. Ngokuvamile emitholampilo yokubeletha noma emtholampilo wabesifazane omama abasha banikezwa amasampula ngezindlela zokunakekela isikhumba somntwana, futhi kuma-pharmacy ngokuvamile kuvame ukuthenga amabhodlela amancane.
Ungayenzaphi ingane i-neurosonography?
Ukwelashwa kokuqokwa kwezingane
Indlela yokwelapha i-pneumonia ezinganeni
Ingane elalelayo: imithetho emine yokukhulisa
I-diarrhea ebantwaneni abancane
I-cheesecake ene-chocolate emhlophe
Amakhukhi we-Lenten oatmeal
Izakhiwo zokwelapha ze-thyme
Ingulube ngemifula kanye nama-apricot omisiwe
I-Myostimulator iyisidingo esiyingqayizivele sokwelapha, ukusikhipha massage nokuqeqeshwa kwemisipha
Indlela yokugubha uNyaka Omusha
Okufanele ukwenze uma ingane inokuqotshwa
Ikhekhe lesikhumba ngaphandle kokubhaka
I-okgeni yokugqoka izingane